Dilkadhacay Wadanka Maraykanka iyo Nin Hubaysan Oo 16 Qof kudilay Gobolka Texas | Warsugan News
Home Wararka Dilkadhacay Wadanka Maraykanka iyo Nin Hubaysan Oo 16 Qof kudilay Gobolka Texas
Dilkadhacay Wadanka Maraykanka iyo Nin Hubaysan Oo 16 Qof kudilay Gobolka Texas
Nov 06, 2017Wararka
Haragaysa(warsugannews.com) Mas’uuliyiinta gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in lix iyo labatan qof lagu dilay kaniisad ku taala magaalada Sutherland Springs ee gobolkaasi, kadib markii uu rasaas ku furay nin hubeysan. Wararku waxaa ay sheegayaan in shan iyo labaatan qof oo kale ay ku ku dhaawacmeen weerarka.
Magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa qiyaasti konton kilomitir dhanka koonfur bari kaga began magaalada San Antonio. Booliska gobolka Texas ayaa warbaahinta maxaliga ee dalkaasi uu sheegay in raggii weerarka geystay la dilay, waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya ciidamada ammaanka oo soo buux dhaafiyay goobta uu weerarka ka dhacay
Gawaarida gurmadka degdega iyo kuwa dab damiska ayaa sidoo kale soo gaaray goobta, waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dadkii halkaasi ku sugnaa lasoo daad gureeyay. Barasaabka gobolka Texas Mr Greg Abbot ayaa sheegay in hadda la tacaalayaan xaalada
Previous PostHalkan ka Daawo : Wasiiru-dawlaha Amniga oo xaqiijiyey in dad loo xidhay iibsiga kaadhadhka codaynta Next Post" SADDEX QODOB OO AAN KULMIYE KU DOORTAY"